Wasaaradaha Arimaha Dastuurka iyo arimaha gudaha oo kulan la qaatey Gudiga madax banaan ee doorashooyinka | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Wasaaradaha Arimaha Dastuurka iyo arimaha gudaha oo kulan la qaatey Gudiga madax...
Wasaaradaha Arimaha Dastuurka iyo arimaha gudaha oo kulan la qaatey Gudiga madax banaan ee doorashooyinka
Kulanka oo ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ayaa ujeeddadiisu ahayd in afarta hey’ad ay k awada hadlaan wadashaqayntooda gaar ahaan hawlaha ay gaarka u leeyihiin iyo kuwa ka dhaxeeya ee ay tahay in si wadajir ah ay uga wadashaqeeyaan.
Intii uu socday kulanka ayaa waxaa ay Hey’adaha ku soo bandhigeen qorsho-hawleedkooda, kadibna waxaa laga dooday sida ay tahay in loo wadashaqeeyo.
Guddiyada Madaxbanaan ayaa waxa ay Wasaaradaha ka codsadeen in ay u soo dedejiyaan diyaarinta shuruucda muhiimka u ah ee ay ku xiran yihiin oawlaha ay qorsheysteen in ay sanadkan qabtaan.
Dhanka kale, Wasaaradaha ayaa ballan qaadeen in ay fulin doonaan codsiga Guddiyada si sanadkan ay guul uga gaaraan hawlaha ay qorsheysteen.
Ugu dambayn, Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ayaa maalmihii dambe waday in ay xiriir wanaagsan oo wadashaqeyneed la yeelato hey’adaha ay hawsha kala dhaxeyso si guul looga gaaro Geedi-socodka Dib-u-eegista Dastuurka.
Previous articleRa’iisul wasaaraha XFS oo qudbad ka jeedin doona shirka dhaqaalaha Aduunka
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo magacaabaya guddi ka shaqeeya dabagalka mashaariicdii uu dhagax dhigay